China High Inqwaba isiyingi Ukwaluka Machine Ukwakha futhi Factory | Imishini kaMorton
Ngabe ufuna ukuthola ukukhiqizwa komshini oyi-High Pile circular Knitting Machine ngesidingo sakho sendwangu ethile?
Singanikela nge-Higher Precision High Pile isiyingi Ukwaluka Machine ukufanisa isidingo sakho kangcono.
ISIBONELO IDAYILI KHAWUZA ABAPHAKI
I-MT - AC- HP 30 "-38" 16-26G 16F-24F
Umshini Wokuluka Oyindilinga Ephakeme Usebenzisa indiza ye-aluminium alloy engxenyeni enkulu yomshini ukwenza ngcono ukushabalalisa ukusebenza kokushisa nokunciphisa ukusonteka kwamandla kwebhokisi le-cam.
2.High Inqwaba isiyingi Ukwaluka Machine obizwa nangokuthi loop usike ukunitha umshini.
Inomklamo oyingqayizivele kumakhamu nabasiki bezinaliti, okungavimbela ngempumelelo izinkinga eziningi zendabuko njengendwangu yomugqa ovundlile noqonde mpo, inqwaba engalingani kanye nokwehlukaniswa kwamabala.
Kunezinhlobo ezimbili zemiklamo ekusikeni kokukhethwa kwamakhasimende: I-Hook ne-cutter kwesinye sezinaliti, i-hook ne-cutter zihlukanisiwe.
Lo mshini ungagijima ngesivinini esikhulu, okukhiphayo kungaphezu kwezikhathi ezi-3 zomshini wendabuko.
6.Iqhwa Eliphezulu Liyisiyingi Ukwaluka Machine lifakwa njengokubukeka okuhle, isakhiwo esizwakalayo nesisebenzayo.
7.Using the high-end materials in the industry and imported CNC machining, to make sure the precision of each element operation and meet the requirements of the cloth.Usebenzisa izinto ezisezingeni eliphezulu embonini kanye nokufakwa kwe-CNC okungenisiwe
Lo mshini usebenza ezintweni ezilukiwe njengochungechunge lwamakhemikhali kasilika, uchungechunge, intambo yoboya emsulwa kanye nefayibha enhle kakhulu. , Futhi ezinye ziyaluka.Ingaluka zonke izinhlobo ze-cashmere zaseKorea, njenge-coral cashmere, carp cashmere, Kirin cashmere, velveteen, sunflower cashmere, Peacock cashmere, bubble cashmere, cotton cashmere / fur cashmere, PV eboyeni, iwulu iwundlu, super -soft cashmere noboya emuva. Zisetshenziselwa okokugqoka, ulwelwesi, okombhede, amathoyizi, indwangu yeSofa, ukhaphethi, ingubo yokulala kanye nesigqiki semoto. Izindwangu zingahlangabezana nezidingo eziphuthumayo zemakethe ezinokukhetha okuhlukahlukene nokusebenziseka okubanzi!
Langaphambilini Intengo ephansi ye-China Thread Fleece knitting Machine
Olandelayo: Factory Professional China High Inqwaba isiyingi Ukwaluka Machine
Terry Isiyingi Ukwaluka Machine
Lower Loop Sika Vula Ububanzi Jacquard Machine